Ziva tembiricha yeNVMe disk yako pane yaunofarira Linux distro | Linux Vakapindwa muropa
Solid mamiriro akaomarara madhiraivha kana maSDD anga achichinja, ne NVMe tekinoroji pakati peavo vanofarirwa nevashandisi vazhinji vachitsvaga kuita kukuru. Aya madhiraivha akaomesa anokurumidza kupfuura akajairwa magineti akaomarara dhiraivha kana maHDD. Uye zvakare, mitengo iri kudonha zvakanyanya, nepo masimba ari kuramba achiwedzera. Naizvozvo, hapasisina zvimhingamipinyi zvakawandisa zvekuve neimwe yeaya madhiraivho akaomarara, ayo anopa mabhenefiti ayo anoonekwa zvakanyanya kana uchivhura zvirongwa kana kutanga.
Zvakanaka, kana uine imwe yeaya madhiraivhi akaomarara pakombuta yako neGNU / Linux distro, sezvazviri kumakomputa eSlimbook, unogona ona tembiricha ye hard drive yako nenzira yakapusa yandinotsanangura pano. Nenzira iyi iwe unozogona kuachengeta ari pasi pekutonga achishanda pamatanho akakwana kana kuona zvingangoitika zvisina kumira zvakanaka kana tembiricha dzakanyanya kukwirira, zvinoenderana nematanho akachengeteka ekushanda anotsanangurwa nemugadziri wega wega mumadhata avo.
Kuti uverenge iyo tembiricha kukosha kweaya maNVMe madhiraivha, chinhu chekutanga chaunofanira kuita ndeche gadza nvme-ehl mutengi mune yako yaunoda distro. Nezve izvo, iwe unogona kushandisa chero anotevera mirairo zvichienderana nedistro yauinayo:
sudo apt-get install nvme-cli<br data-mce-bogus="1">
sudo zypper install nvme-cli<br data-mce-bogus="1">
sudo yum install nvme-cli<br data-mce-bogus="1">
sudo pacman -S nvme-cli<br data-mce-bogus="1">
Izvi zvichaisa paDebian / Ubuntu, openSUSE / SUSE, CentOS / RHEL / Fedora, uye Arch Linux zvichiteerana. Kamwe yaiswa, ku verenga iyo tembiricha kukosha, iwe unongofanirwa kuita zvinotevera:
sudo nvme smart-log /dev/nvme0 | grep '^temperature'
Izvi zvinokuratidza iyo tembiricha pachiratidziri. Kana iwe ukasashandisa grep sefaera, ruzivo rwese maererano neiyo NVMe disk ichaonekwa, asi izvi zvinokuchengetedza iwe uchizvitsvaga mune chakabuda. Nenzira, iwe unotoziva kuti kana uine mamwe maNVMe disks, unogona kutsiva / dev / nvme0 nenhamba yekushandisa yaunoda kutarisa...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Ziva tembiricha yeNVMe disk yako pane yako yaunofarira Linux distro
Chrome inovandudza Saiti Isolate muChannel 77 uye zvakare inosvika yeApple
Linux bug inotisiya isu takatarisana nekurwiswa kuburikidza neWi-Fi